राजा सोलोमन को खान (भाग १४) - भगवान स्विट्जरल्याण्ड को विश्वव्यापी चर्च
मिडिया > जर्नल उत्तराधिकार > पत्रिका उत्तराधिकारी 2014-04 > खनन राजा सुलेमान (भाग 13)
"म लडाकू हुँ। म विश्वास गर्छु कि यो नेत्र-आँखाको लागि सामग्री हो। मैले मेरो गाला समातें म एक मानिस को लागी आदर छैन जो पछाडि लडाई छैन। यदि तपाईंले मेरो कुकुरलाई मार्नुभयो भने, तपाईंले आफ्नो बिरालालाई सुरक्षामा लिनु पर्छ। 'यो भनाइ अजीब लाग्न सक्छ, तर साथसाथै बक्सि champion च्याम्पियन च्याम्पियन मुहम्मद अलीले पनि यस्तो व्यवहार गरे जुन धेरै मानिसहरूले साझा गरेका छन्। अन्याय हामीलाई हुन्छ र कहिलेकाँही यति दुख्छ कि हामी बदलाको लागि सोध्छौं। हामी ठगिएको महसुस गर्दछौं वा अपमान गरिएको जस्तो लाग्छ र यसको बदला लिन चाहन्छौं। हामी हाम्रा विरोधीहरूले हामीले भोगेको पीडा महसुस गरेको चाहन्छौं। हामी हाम्रा विरोधीहरूलाई शारीरिक पीडा दिने योजना गर्न सक्दैनौं, तर यदि हामी मानसिक वा भावनात्मक रूपमा उनीहरूलाई थोरै उपहासको माध्यम बाट कुरा गर्न सक्छौं वा कुरा गर्न इन्कार गर्छौं भने, हाम्रो बदला पनि मीठा हुनेछ।
"म नराम्रो बदला दिनेछु" नभन! "परमप्रभुमा पर्ख, उहाँले तिमीलाई मद्दत गर्नुहुनेछ" (हितोपदेश 20,22)। बदला जवाफ होइन! कहिलेकाहीँ भगवानले हामीलाई कठिन कामहरू गर्न सोध्नुहुन्छ, होइन र? क्रोध र बदलामा नरोक्नुहोस्, किनकि हामीसँग अमूल्य खजाना छ - जीवन परिवर्तन गर्ने सत्य। "परमप्रभुलाई पर्ख"। यी शब्दहरू धेरै छिटो नपढ्नुहोस्। यी शब्दहरूमा मनन गर्नुहोस्। हामीलाई पीडा, तितोपन र क्रोध निम्त्याउने चीजहरूसँग व्यवहार गर्ने कुञ्जी मात्र होइन, तर तिनीहरू परमेश्वरसँगको हाम्रो सम्बन्धको मुटुमा छन्।
तर हामी सबै प्रतीक्षा गर्न चाहँदैनौं। कफी-टु गो, एसएमएस र ट्वीटरको युगमा, हामी अहिले र तुरुन्त सबै चाहान्छौं। हामी ट्राफिक जाम, कतारहरू र अन्य समय लुटेराहरूलाई घृणा गर्दछौं। डा जेम्स डोब्सन यसप्रकार वर्णन गर्दछन्: “एक समय थियो जब तपाईले गाडी चलाउनु भयो भने तपाईलाई वास्ता भएन। तपाईंले भर्खर एक महिना पछि गर्नुभयो। यदि तपाईंले यी दिनमा घुमाउने ढोका खोल्न कुर्नु पर्छ भने, आक्रोश बढ्छ! "
बाइबलमा वर्णन गरिएझैं पर्खाइको सुपरमार्केट चेकआउटमा दाँत पिँध्नसँग केही गर्नुपर्दैन। प्रतिक्षाको लागि हिब्रू शब्द "कव्वा" हो र यसको अर्थ केहि आशा हो, केहि आशा गर्नु हो र अपेक्षेपणको अवधारणा समावेश गर्दछ। बच्चाहरू क्रिष्टमस बिहान उठेर आमाबाबुहरूको लागि उत्सुक छन् र तिनीहरूलाई आफ्नो उपहार खोल्न दिनुहोस् यस प्रत्याशाको चित्रण गर्दछ। दुर्भाग्यवस, आशा शब्दले यसको अर्थ आज हरायो। हामी यस्ता कुराहरु भन्छौं "आशा छ कि म काम पाउँनेछु।" र "आशा छ भोलि पानी पर्दैन।" तर त्यस्तो आशा निराश हो। बाइबलीय आशाको बिषयमा पक्का विश्वास छ कि केहि हुन्छ। केहि पूरा हुने निश्चितताको साथ अपेक्षा गरिएको हुन्छ।
के सूर्य फेरि उदाउँछ?
धेरै वर्ष अघि मैले ड्र्याकेन्सबर्ग (दक्षिण अफ्रिका) को पहाडहरूमा केही दिन पैदल यात्रा गरें। दोस्रो दिनको साँझ यो बाल्टिनबाट खन्यायो र जब मैले एउटा गुफा फेला पारेँ म भिजेको थिएँ र मेरो म्याचबक्स पनि थियो। निद्राको प्रश्न बाहिर थियो र घण्टा बित्न चाहँदैनथ्यो। म थाकेको थिएँ, जमेको थिएँ र रातको अन्त्यको लागि पर्खन सक्दिन। भोलिपल्ट बिहान फेरि घाम उदाउँला भन्ने शंका थियो ? पक्कै होइन! म सूर्योदयको पहिलो संकेतको लागि अधीरतापूर्वक पर्खिरहेको छु। बिहान चार बजे आकाशमा उज्यालोको पहिलो लहर देखा पर्‍यो र दिनको उज्यालो आयो। पहिलो चराहरू चिच्याए र म पक्का थिएँ कि मेरो दुःख चाँडै समाप्त हुनेछ। म यो आशा संग पर्खें कि सूर्य उदाउनेछ र एक नयाँ दिन बिहान हुनेछ। म अँध्यारोलाई उज्यालोमा बाटो दिने र घामको न्यानोपनले चिसोलाई प्रतिस्थापित गर्नको लागि पर्खिरहेको थिएँ (भजन १३०:६) सुरक्षा अपेक्षा प्रत्याशा धैर्यता आनन्द। बाइबलीय अर्थमा पर्खनु भनेको ठ्याक्कै यही हो। तर तपाईं वास्तवमा कसरी पर्खनुहुन्छ? तपाईं कसरी प्रभुको प्रतीक्षा गर्नुहुन्छ? भगवान को हुनुहुन्छ भनेर आफैलाई थाहा दिनुहोस्। तिमीलाई थाहा छ!
हिब्रूहरु को पत्र मा भगवान को प्रकृति को बारे मा बाइबल मा केहि धेरै उत्साहजनक शब्दहरु छन्: "त्यहाँ के छ सन्तुष्ट हुनुहोस्। किनकि प्रभुले भन्नुभयो: "म तिमीलाई त्याग्ने छैन वा तिमीलाई छोड्ने छैन"। (हिब्रू १३:५)। ग्रीक विशेषज्ञहरु को अनुसार, यो खण्ड को शब्दहरु मा अनुवाद गरीएको छ "म कहिल्यै, कहिल्यै, कहिल्यै, कहिल्यै, तिमीलाई कहिल्यै छोड्ने छैन।" हाम्रा मायालु बुबा बाट कस्तो प्रतिज्ञा! उहाँ मात्र हुनुहुन्छ र उहाँ राम्रो हुनुहुन्छ। त्यसोभए हितोपदेश २०:२२ को पदले हामीलाई के सिकाउँछ? बदला नखोज। भगवानको लागि पर्खनुहोस्। र? उहाँले तिमीलाई छुटकारा दिनुहुनेछ।
के तपाईंले याद गर्नुभयो कि विरोधीलाई दण्डको व्यवस्था गरिएको छैन? तपाईंको उद्धार केन्द्रित छ। उसले उसलाई बचाउँछ। त्यो एक प्रतिज्ञा हो! भगवानले यसको ख्याल राख्नुहुनेछ। उसले चीजहरू फेरि सही ट्र्याकमा राख्नेछ। उसले आफ्नो समय र आफ्नै तरिकामा यसलाई स्पष्ट पार्नेछ।
यो निष्क्रिय जीवन बिताउने वा भगवानले हाम्रो लागि सबै कुरा गर्ने पर्खाइको बारेमा होइन। हामी स्वतन्त्र रूपमा बाँच्नु पर्छ। यदि हामीले क्षमा गर्नुपर्दछ भने हामीले पनि क्षमा गर्नुपर्दछ। जब हामी कसैको सामना गर्नुपर्दछ, हामी कसैको सामना गर्दछौं। यदि हामीले अनुसन्धान गर्नुपर्छ र आफैलाई प्रश्न गर्नुपर्‍यो भने हामी त्यो पनि गर्छौं। जोसेफले प्रभुको प्रतिक्षा गर्नु परेको थियो, तर जब उनी कुर्दै थिए, उनले आफूले सकेजति गरे। उनको परिस्थिति र उनको कामप्रति उनको मनोवृत्तिले पदोन्नति निम्त्यायो। जब हामी पर्खन्छौं परमेश्वर परमेश्वर निष्क्रिय हुनुहुन्न, तर पज्जलका सबै टुक्राहरू सँगै राख्नको लागि पर्दा पछाडि काम गर्दछ जुन अहिले सम्म छैन। त्यसो भएमा मात्र उसले हाम्रो इच्छा, चाहना र अनुरोधहरू पूरा गर्नेछ।
परमेश्वरसँगको हाम्रो जीवनको लागि पर्खनु अत्यावश्यक छ। जब हामी भगवानको लागि पर्खन्छौं, हामी उहाँमा भरोसा राख्छौं, उहाँमा आशा राख्छौं र उहाँको बाटो हेर्छौं। हाम्रो पर्खाइ व्यर्थ हुँदैन। यो आफैलाई देखिने बनाउँदछ, सम्भवतः हामीले अपेक्षा गरे भन्दा फरक। उसको कार्यहरू तपाईंले कल्पना गर्न भन्दा गाह्रो हुनेछ। तपाईंको चोट, तपाईंको रीस र अप्रसन्नता, तपाईंको शोक परमेश्वरको हातमा राख्नुहोस्। बदला लिनुहोस्। न्यायलाई आफ्नै हातमा नलिनुहोस् - त्यो परमेश्वरको काम हो।
गोर्डन ग्रीन द्वारा